Company Kolontsaina - Huizhou Jinhaocheng Co., Ltd
Amin'ny ambony kalitao ny vokatra, rehefa lehibe-varotra fanompoana sy ny fiantohana ny politika, matoky isika, hahazo avy amin'ny mpiara-miasa any ampitan-dranomasina maro dia maro feedbacks tsara nanatri-maso ny fitomboan'ny ny orinasa.
Izahay foana hihazona ny orinasa foto-kevitra "manao ny marina, matihanina, mahomby sy ny fanavaozana", sy ny asa fitoriana ny; aoka izay rehetra mpamily mankafy ny mitondra fiara amin'ny alina, dia aoka ny mpiara-miasa dia afaka hahatsapa ny zava-dehibe eo amin'ny fiainana, ary ho mahery sy ny asa fanompoana bebe kokoa ny olona. Tsy tapa-kevitra ny ho tonga ny integrator ny vokatra tsena ary ny iray-mijanona mpanome tolotra ny vokatra tsena.
Izahay misisika foana ny fitantanana-pinoany ny "Quality dia Voalohany, Teknolojia dia mandritra ny herinandro, fanaovana ny marina sy ny Fanavaozana" .We dia ho afaka ny hitombo vokatra vaovao hatrany ho ambony ambaratonga hanomezana fahafaham-po ny mpanjifa samihafa ilain'ny.
Manana henjana sy ny rafitra fanaraha-maso ny kalitao tanteraka, izay miantoka fa ny tsirairay dia afaka hihaona hatsaran'ny vokatra fepetra ny mpanjifa. Ankoatra, ny vokatra rehetra efa mafy nandinika alohan'ny fanondranana.
Ny Skills & Expertise
Nametraka "ho creditable no manao azy mba hahazoana ny fampandrosoana sy fanavaozana mitohy" araka ny teny filamatra. Te hizara ny traikefa amin'ny namana tao an-trano sy any ivelany, ho fomba iray hamoronana mofo lehibe kokoa miaraka amin'ny mpiray ezaka. Manana za-draharaha maro R & D olona ary mandray baiko OEM.